Ingaba ulahlekelwe isiqhelo okanye lonke ixesha lokuqala le-CW drama 90210, sikufumene isiqendu esilungileyo sokunceda ababukeli balondoloze izinto ezahlukahlukeneyo kwiikhowudi yethu ye-zip.
I-1x01 "Asikho eKansas Konke" (OAD: 9/2/08)
I-Credit Photo: I-Frank Ockenfels / I-CW © I-CW Network, LLC. Onke Amalungelo Agciniwe.
Hlangana nomndeni wakwaWilson, osanda kuthuthela eBeverly Hills ukusuka eMidwest. UHarry Wilson, usapho losapho, uya kuba yinqununu entsha kwi-West Beverly Hills High School. U-Annie noDixon Wilson abazange bajabule kakhulu ukuqala isikolo esitsha, kwaye ukuba uyise wabo njengenqununu ayenze kube lula.
I-1x02 "I-Jet Setha" (OAD: 9/2/08)
I-Credit Photo: uMichael Desmond / I-CW © 2008 I-CW Network, LLC. Onke Amalungelo Agciniwe.
Njengoko uchungechunge luqala ukuqhubeka, sidibana nabantu abalingani: UNahomi, intombazana ecebileyo ephandanayo no-Ethan, umdlali we-hunky okhohlisa kuye. Isilivere (aka Erin Silver) ayikho i-block-scored block blogs kunye ne-Kelly Taylor udadewabo, kunye ne-Navid ngumhleli wephephandaba.
Kule ngqungquthela, iDixon yenza ingqiqo enkulu kwibala lacrosse. U-Annie kunye nesoka lakhe liqhekeka, kodwa kungekudala ngaphambi kokuba atyelele kwi-hottie egama linguTy udibana nokuphicothwa kwidlala yesikolo. UTy uhlamba u-Annie ezinyaweni zakhe ngokumgibela eSan Francisco ngomhla.
UBrenda Walsh ubuyela eBeverly Hills kwaye uhlala kunye noBFF wakhe omdala uKelly Taylor, esiyifunayo unomntwana oneminyaka engama-4 ubudala!
I-1x03 "I-Lucky Strike" (i-OAD: 9/9/08)
I-Credit Photo: U-Art Streiber / I-CW © 2008 I-CW Network, LLC. Onke Amalungelo Agciniwe.
U-Annie noDix onokutshisa uLwesihlanu izicwangciso zobusuku zidibaniswa xa abazali babo bebanqabisa ubusuku bentsapho. Ukuba ngaba bafana abatshabalalayo, aba bobabini balungiselela ukuba abahlobo babo bahlangane nabo kwi-bowling alley kwaye kungekudala wonke umntu ujoyine kwi-Wilson yohlobo lomtshato ebusuku.
Kule ngqungquthela, sifunda ukuba i-Siliva iye yahlala kwindawo yokukhusela engenamakhaya ngenxa yokuba ukusela kwakhe konina kuphelile. Emva kokulwa noJackie, uKelly wenza isigqibo sokuba avumele iSiliva ingene naye.
U-Annie uzithandana noTy and Ethan. Njengoko izinto zibonakala zihamba phambili noEtan, uNahomi ufika kwindawo yokukhothama ngendlela engafanelekanga kwaye enomdla omkhulu emva kokuba afunde uyise unesithandana.
1x04 "I-Bubble" (OAD: 9/16/08)
Ifoto nguThos Robinson / Getty Izithombe
Xa umlawuli we-West Beverly womculo, i- Spring Awakening , ehla, uThabitha uyangena ekuthatheleni ukubusa. Ukuqaphela umdlalo uhambela ekuhlaleni, uKelly uqinisekisa uBrenda ukuba angene kwaye athathe. UBrenda no-Adrianna baqalisa ngokukhawuleza ukuxhamla.
UNahomi unengxabano kunye nenkosikazi kayise kwaye uphazamiseka xa efunda ukuba abazali bakhe bahlukanisa.
UCelly noBrenda bawa phantsi xa uBrenda enza ukuba azive ngayo ngobudlelwane bukaCelly noRyan.
U-Annie utshela uTy ukuba ahambe nomhla no-Ethan, ongenakuhamba ngokucwangcisiweyo.
UDixon ufumana umsebenzi wexeshana kwiPeach Pit.
I-1x05 "I-Phaphama ne-Dreaming" (OAD: 9/23/08)
Ubusuku obuvulekileyo be- Spring Awakening lusondela kakhulu kwaye u-Annie noTy ubuhlobo bubuyela emva. Njengoko ezo zibini zisondela kunanini ngaphambili, uHarry uqala ukuxhalabisa ngobukhulu bobudlelwane babo. Khawucinge ukuba wayevakalelwa njani ukuba wayesazi nje ukuba u-Annie noTy baye benza icebo lokufumana igumbi lehotele le-after-party!
Xa iSiliva ingena phezu kwentloko yakhe njengomphathi wesigaba, uDixon uyangena ukuze amnike isandla kwaye zibini. Ezi zimbini ziyakhupha ngokuphela kobusuku kwaye ulwalamano olutsha luqala.
U-Adrianna ubonisa ubusuku bokuvula kwizidakamizwa, ekugqibeleni ziphumo ku-Annie ekhokela kulo mdlalo, ukuhamba okungeke kujeziswe ngu-Adrianna.
Kwixesha elilandelayo, u-Adrianna uchitha u-Annie noThi ubusuku obukhethekileyo, kwaye ezo zimbini ziyahlukana.
I-1x06 "Uhlobo lokuziphatha" (OAD: 9/30/08)
UCelly, uRyan, uBrenda noHarry babhekana no-Adrianna malunga nokusetyenziswa kakubi kweziyobisi, kodwa umntwana ochasa ukuba unengxaki.
U-Annie no-Adrianna baphoqelelwe ukuba basebenzisane kunye neprojekthi malunga nemisebenzi, ngoko xa uDebbie ethola umsebenzi njengomfoto wefestim enkulu, abantombazana amabini basebenzisa ithuba lokusebenza kwiprojekthi. Xa umvelisi wefilimu ye-indie eqaphela u-Annie ukusuka kumculo, uyamnika uphicotho. U-Annie uyamqinisekisa ukuba afake uArianna, kwaye yena uyavuma ukuba u-Annie ubeka iTy up kwi-party.
UNahomi usebenzisa umboniso wefashoni njengethuba lokuhlangana kwakhona nabazali bakhe, kodwa kuhamba kakubi xa befumana umlo omkhulu.
UKelly ufumana umnxeba ongaqondakali owenza ukuba wakhe wesibini uqaphele ukulwa kwakhe noRyan.
I-1x07 "I-Hollywood yonaphakade" (OAD: 10/7/08)
U-Annie no-Ethan bazana kakuhle xa bebambisane kwiprojekthi yeklasi apho kufuneka banakekele umntwana.
Isilivere kunye neDixon sisondela emva kokugubha isiqingatha sakhe sokuzalwa kwi-Hollywood Forever Cemetery.
UTracy (unina kaNahomi) uxelela uHarry ukuba uqeshe i-PI ukunceda ukufumana unyana wakhe, awayewunikelwe ukuba athathe iminyaka eyamkelayo.
Imizamo kaNahomi yokuncedisa u-Adrianna ukujongana neengxaki zeziyobisi kumhlaba xa ehlala ephethe isikhwama (ngokoqobo) ngexesha lokuhlaselwa kweziyobisi esikolweni.
URyan uyazi ukuba uyayikhathalela kangakanani uKelly emva kokuhamba ukuya kubona uDylan.
I-1x08 "Ayikho indawo efana nokuzimela" (OAD: 10/28/08)
Ixesha lokudanisa eWest Beverly! U-Ethan noAnnie banqwenela ukuya kumdaniso kunye-ngaphandle koko "behamba kunye."
U-Adrianna ufumana uNahomi kwi-hook ngokuvuma kwakhe ingxaki yeziyobisi aze ahlole kwakhona. Uvakalelwa kukuba uyedwa, u-Adrianna ufumana umoya wobubele e-Navid (oye wahlupha kuye iminyaka).
Esikhundleni sokuya kumdaniso, uDixon uyayinakekela iSiliva, oya kuvela kwi-canal ingcambu.
Umfundi omtsha ongu-sassy ogama lakhe linguKimberly ufika, kwaye ngokukhawuleza sifunde ukuba uyipolisi yecala.
U-Tracey ubeka uHarry noDebbie ukuba bathethelele emva kokuqeqesha abanye baseThabitha.
I-1x09 "Iimfihlelo kunye namaxoki" (OAD: 11/4/08)
UAnnie noDixon bayothuka ubomi babo xa uHarry noDebbie babatshela ngomzalwana abazange bazi ukuba banabo.
Nangona iDixon ibonakala ithatha iindaba ezihamba phambili, u-Annie ugxotha intlungu yakhe kwindoda engasendle endlwini kaNahomi.
U-Annie no-Ethan banexesha elinzima lokufihla ulwalamano lwabo kuNahomi, owenza isithembiso sika-Annie ukuba angabandakanyeki naye.
Kanye uRyan efumanisa ukuba uKimberly ubeka njengomfundi, aba babini abakwazi ukugcina izandla zabo. Cinga ukuba bayamangalisa xa befunda ukuba umfundi ubona ebanga!
U-Adrianna no-Navid baya kufutshane, kodwa izinto ziba nzima xa efumana ingcamango engalunganga ngeenjongo zakhe.
I-1x10 "Iimidlalo Abantu abadlala" (OAD: 11/11/08)
Uhlobo lukaRyan noKimberly olufihlakeleyo luphuma ngumfundi obona ebanga. Ukuze kugcinwe i-cover kaKimberly ekuqhutyweni, uHarry unikela uRyan ithuba lokungabikho. Xa uKelly ebuya ekutyelele uDylan, uyenze kunye noRyan emva kokufunda ukuba wamanga "umfundi."
UNawomi ubona obomvu xa iintlola zikaEthan no-Annie zikhanga kwigumbi lokufundela kwaye zigqiba ukuziphindezela ngokulungiselela u-Annie owayengumfana owayevela eKansas ukuba afike ngexesha lakhe elimnandi. Emva kokuba uAnnie afunde oko uNahomi akwenzile, loo mantombazana amabini angena kumdlalo wokumemeza ngaphandle - kodwa uphazamiseka ngokubonakala komntakwabo.
I-Navid ingenisa u-Adrianna kwintsapho yakhe. Iimvakalelo zakhe kuye zijonge xa ​​efunda ukuba useyintombi.
I-1x11 "Into esiyichithayo" (OAD: 11/18/08)
U-Annie no-Naomi baxabana xa bezama ukujongana nokufika komzalwana wabo u-Sean. UHarry wenyuka wamkela "unyana" wakhe ngeengalo ezivulekile kwaye umema ukuba ahambe kunye nosapho.
Isilivere senza umona xa i-cheerleader ibonakala ibonisa umdla kuDixon, ovakalelwa njengomntu ovela ngaphandle ngoku ukuba uSean usemfanekisweni.
Ubuhlobo bukaKelly noBrenda buya kuba bubi xa uBranda ebonisa ukuba walala noRyan emva kokubonisa imodeli. Ezinye izinto azisoze zitshintshe ngala mabini!
UNahomi wenza abahlobo abatsha, abenza ukuba kucace ukuba babo ubuhlobo bunjalo.
1x12 "Sawubona, Goodbye, Amen" (OAD: 1/6/09)
UNawomi noAnnie baxabana nabo bachitha ixesha elininzi kunye noSean. Nangona intsapho ibonakala ihamba kakuhle noSean, u-Annie uyasuswa xa eva uSean kwifowuni. Ukusola kwakhe kuphakanyiswa xa uSean etshela uHarry ukuba kufuneka afike ngexabiso elikhulu okanye uza kubulawa.
U-Adrianna umema uBrenda ukuba axhase imini kwi-rehab yakhe, nangona kunjalo ihlabathi lika-Adrianna liguqulwa ngokupheleleyo xa efunda ukuba ukhulelwe!
U-Dixon no-Christina (u-cheerleader) ubuhlobo bukhula kwaye ummema ukuba aye kwiqela elikhulu elibandakanya amagama amakhulu kumashishini omculo - ukumenywa kweDixon akwazi ukuthetha ngeSiliva.
U-Annie uyamangalisa xa uHarry efumanisa ukuba uSean wayebuqhetseba.
1x13 "Ndithande okanye Undishiye" (OAD: 1/13/09)
UDebbie ucasukile xa uThabitha uthengisa imoto imoto ngaphandle kokuxoxisana nayo yokuqala. U-Annie no-Ethan bathatha uhambo oluya endlwini kaThabitha ePalm Springs bazalise injongo yokuthabatha ubudlelwane babo kwinqanaba elilandelayo (elingenzekiyo).
U-Adrianna utshela uNahomi ngokukhulelwa kwakhe kwaye ezimbini ziba yi-BFF kwakhona. Nangona kunjalo, izinto azihambi kakuhle phakathi kwayo kunye neNavy xa ezalisekile kwiimeko zakhe.
Ulwalamano lukaDix kunye neSiliva lithatha umtsalane xa uthi, "Ndiyakuthanda."
Emva kokufunda ukuba uThabitha wakhuthaza uAnnie ukuba aye ePalm Springs, uHarry noDebbie bagxininisa apho, ukuba bafumane u-Annie no-Ethan belele emagumbini ahlukeneyo.
1x14 "Ngengozi" (OAD: 1/20/09)
UKelly noNaomi bahlala nguArianna njengoko ejongene nemeko yakhe. Bakhuthaza ukuba abonakalise uyise womntwana, ojika waba nguTy!
U-Annie no-Ethan baqhelisela ukuphicothwa kwakhe. U-Ethan uyavuma ukuzama ukwenza umdlalo ukuze abo babini banokuchitha ixesha elide kunye - kwaye emva kokufunda ukuba uTy uya kuba uphando. Udidekile gqitha xa u-Adrianna ekhokela.
UDixon uya kuDebbie malunga neengcebiso zobudlelane xa izinto ziyanzima ngeSiliva. Ekugqibeleni ugqiba ekubeni aphule naye.
U-Ethan ubandakanyeka engozini yemoto ngelixa efonini kunye noAnnie.
I-1x15 "Uncedise i-Rhonda" (OAD: 2/3/09)
U-Adrianna utshela uTy ukuba ukhulelwe, kwaye nguyise. Xa sele eqala ukutshitshiswa kwakhe, uTy utshela ukuba ukhona apho kwaye abazali bakhe baya kuba njalo. Nangona engazange aphule iindaba kumama wakhe, u-Adrianna udibana nabazali bakaTy, abo bathatha ixesha elikhawulezayo le meko.
U-Ethan udibana noRhonda, intombazana eyalimala engozini yemoto. Njengoko bazana kakuhle, u-Ethan uyazi ukuba uhlala kwindawo yokuphila kwakhe, ngoko uqala ukuphila ubomi ngaphandle kwenduduzo yakhe.
I-Dixon neSiliva iphikisana, kodwa ekugqibeleni yenza kwaye ubuye kunye.
Xa unina kaTy eqaqa imida yakhe, unina ka-Adrianna uyazibandakanya. Okumangalisa kukuba, ulawula ukukhulelwa kweendaba ezingcono kunokuba kulindeleke.
I-1x16 "ye-Heartbreaks kunye neeNkonzo" (OAD: 2/10/09)
Ifoto: UMichael Desmond / I-CW © I-CW Network. Onke Amalungelo Agciniwe.
Ngosuku lukaValentine kunye nothando lusemoyeni!
UDylan McKay wesizukulwana esitsha ufika ku- 90210 ngohlobo lweLiam, u-bartender ongummangaliso uNahomi uhlangana ehotele. Iintlanzi zihamba ngokukhawuleza phakathi kwezi zibini.
U-Ethan nobudlelwane baka-Annie baxabisa xa beqala ukuchitha ixesha elininzi kunye noRhonda. U-Annie udibanisa kumgangatho kaNahomi ngokungcola kuRhonda ukuba asebenzise nxamnye naye, kodwa uyabuya ngendlela engalunganga.
Ubusuku bukaDix kunye neSiliva abuhambanga njengoko lucwangcisiweyo, kodwa luya kuba luhle kwixesha elide.
U-Adrianna uhlala ngobusuku kunye necholethilethi kuphela ukugcina inkampani yakhe, kodwa ubusuku buya kuba ngcono xa efumana isivakashi esimangalisiweyo.
I-1x17 "Ubomi be-Drag" (OAD: 3/31/09)
UNahomi uyaqhubeka ephishekela uLiam kwaye unikezela ukuba ngumfundisi weematriki ngokuzama ukuzithela ixesha elilodwa kunye ne-hunk. Xa u-Liam emthatha ebusweni obusendle be-racing racing, ngaba ukunyaniseka kwakhe kuya kuba yintlonelo, okanye iphendule ngaphezulu koko? Isilivere ilahlekelwa ingqondo yakhe? Oko kukuvumelanisa ngokubanzi xa isabelo sevidiyo siphenduka ibali elinoyikisayo / elithandayo elibonisa iDionon. Ubuhlobo buka-Annie no-Ethan buhlukumeza xa u-Adrianna eveza ukuba wabona u-Ethan kunye no-Rhonda kumanga.
I-1x18 "Vala i-Rails" (OAD: 4/7/09)
Kulo Jason Priestley ulandelele isiqendu, uRyan noKelly baya kukhangela iSiliva. Ukukhangela kwabo kubangenisa kwikhaya likaKelly, apho abafazi ababini banokutshintshiselana. UDixon uxelela abazali bakhe okwenzekile ngeSiliva kwaye abayithokozisiyo. Ubuhlobo buka-Annie no-Ethan buya kuqhubeka. U-Adrianna no-Navid bazama isandla sabo xa bebeletha umntwana xa bebeletha unyana kaKelly - kwaye bayamangalisa indlela ivela ngayo kwimvelo.
I-Credit Photo: UMichael Desmond / I-CW © 2009 I-CW Network, LLC. Onke Amalungelo Agciniwe.
UDonna Martin ubuya! UDonna ukhokhe iKelly ukutyelela esuka eJapan, kwaye sifunda ukuba konke akulungile phakathi kwakhe noDavid. UDiablo Cody (obonakala kule ngqungquthela) ucela uDonna ukuba ayenze imbobo ukuba agqoke kwiphephethi ebomvu. UDixon noAnnie bathabathe indlela yokuvakashela umama wakhe. U-Ethan usebenzisa ikhefu lakhe lokuzivocavoca ngeHitatat for Humanity. Xa u-Liam ejoyina imbangela, uNahomi uyayichaza ukuze ahlale ixesha elithile ngokunyaniseka kwakhe okusha - kwaye akuyi kuhamba kakuhle.
I-1x20 "Phakathi koMqondiso kunye nendawo enzima" (OAD: 4/21/09)
UDonna ubhekene nesigqibo esinzima - ukuba abuyele kuDavid eJapan, amshiye kakuhle aze abuyele eBeverly Hills ukuze asebenze ngemfashini? Liam iyaqhubeka iyimpembelelo embi ku-Ethan. U-Adrianna and Navid udliwano-ndlebe nabazali abasamkela umntwana wakhe. UAnnie noNahomi banquma ukuba ngabahlobo kwakhona.
1x21 "I-Dionysian Debacle" (OAD: 4/28/09)
U-Adrianna no-Navid batshitshiswa ngabazali babo xa betyhila izicwangciso zabo zomtshato. UNahomi uyavuya xa udadewabo uJen ebuyela eBeverly Hills - njengabo baWilson, abaphelile ekupheleni kukaNahomi! U-Annie noNahomi bahamba ngosuku oluphindwe kabini, apho uLiam uhamba khona u-Annie.
I-1x22 "Iqela leNgaphezulu" (OAD: 5/5/09)
I-Credit Photo: Art Streiber / I-CW © I-CW Network, LLC. Onke Amalungelo Agciniwe.
Iqela leBeverly Hills liphonsa i-Navid kunye no-Adrianna bachelor kunye namaqela e-bachelorette. Ngoxa i-Adrianna ibandakanya ngokutya ukutya, iqela le-Navid liquka ukuziphatha kakubi kwiqela le-burlesque. Ulwalamano lukaDix kunye neSiliva luyaqhubeka nokuhla. I-chemistry phakathi kukaJen noRyan ibonakala, njengokuba kuphakathi kuka-Ethan neSiliva.
1x23 "Ukunyamezela iZero" (OAD: 5/12/09)
Ifoto nguScott Gries / Getty Images
Ubusuku obusondeleyo bufikile ekugqibeleni! U-Liam ucela uNahomi ukuba athethe emva kokuba uKelly noHarry bathethe ngaye ngokungabandakanyeki kwimisebenzi efana nentsha. Abafazi bafumana i-makeovers ephawulekayo ngumbhali owaziwayo, apho uNawomi ehlawula khona ubudlelwane bakhe noLiam. UDixon utyunjwa ukuba abe yinkosi, kwaye i-Siliva yomoya iphumelele ngokuphumelela inkosikazi. Njengoko esamkela isithsaba sakhe, iSiliva yenza inkulumo esuka entliziyweni ephikisa intsingiselo yecala elipheleleyo lenkundla, isenzo esichukumisa iDixon. U-Annie uhamba noCharlie, ocaphukisa gqitha xa eqonda ukuba akayi kumjonga ngothando.
I-1x24 "Iqela elinye linokutshabalalisa ihlobo lakho elipheleleyo" (i-OAD: 5/19/09)
U-Adrianna uya emsebenzini kwi-prom. Ubusuku buka-Annie buba yintlungu xa abanye beBH abafundi beqhankqalaza xa bekholelwa ukuba uchithe iimbotyi malunga nokuhlala kwiphathi elilandelayo. UDixon ubenalo ngeSiliva apho amthabatha khona kumzuzwana osondelene naye no-Ethan (obonakalisa iimvakalelo zakhe zokwenene kuye). U-Liam, ekholelwa ukuba uNahomi wayemthembele, uthe walala noJen. UNawomi ubamba u-Liam ukukopela kuye, kodwa ukholelwa ukuba wayekunye no-Annie kunye nokulwa okukhulu. U-Annie uhlaziswa ngokupheleleyo kwiqela kwaye ushiya, kodwa kungekhona ngaphambi kokubamba ibhotile yotywala. Ngethuba lokusa kwentsasa, u-Annie uxakekile uqhuba, uhlasele umhambi kwaye uqhubeka eqhuba.
Indlela yokuqhagamshelana neeNethiwekhi zethelevishini
I-Venus Sagittarius Uthando olufanelekileyo
Ukuqokelela i-Disney Cookie Jars
Iifoto zeGolfer Paula Creamer
Amaxesha ama-United States angenelele ekukhetheni kwamanye amazwe
Indlela yokwakha Ithebhile yePing-Pong - Izicwangciso zokwakha Itheyibhile Yakho yeTable eTable Table